Waa muhiim inaad guriga joogto haddii aad xanuunsaneyso. Waxaad sidoo kale u baahan tahay inaad tijaabo dhiibto si aad ugu ogaato inaad Covid-19 qabtid. Tijaabada iyo shaybaarku waa isku mid.
Iska tallaal Covid-19 markaad bogsato ka dib, haddii aanad horey isku tallaalin.
Isku day inaad xidhiidh la samayso saaxiibadaa iyo qoyskaaga tusaale ahaan waad isa soo wici kartaan.
Waxa wanaagsan in sida caadiga ah wakhti isla mid ah wax la sameeyo. Waxaad tusaale ahaan kici kartaa oo aad quraacan kartaa isla xilligaad sidaas sameyn jirtey.